Bayern Munich Oo Ka Laabatay Hanjabaadii Ay U Gudbisay Xulka Jarmalka Laakiin Colaada Marc-Andre ter Stegen Iyo Manuel Neuer Weli Waa Ay Taagan Tahay | Laacib.net
Bayern Munich Oo Ka Laabatay Hanjabaadii Ay U Gudbisay Xulka Jarmalka Laakiin Colaada Marc-Andre ter Stegen Iyo Manuel Neuer Weli Waa Ay Taagan Tahay
September 25, 2019 Balaleti 2
Madaxweynaha Bayern Munich Uli Hoeness ayaa ka laabtay hanjabaadiisii aheyd inuusan u ogolaan doonin ciyaartoyda Jarmalka ee kooxda u dheela inay u ciyaaraan xulka qaranka Jarmalka haddii Marc-Andre ter Stegen uu booska koowaad ee goolhayaha kala baxo Manuel Neuer.
Hanjabaada uu madaxweynaha u gudbiyay xiriirka kubada cagta Jarmalka ayaa si weyn loo dhaleeceeyay, iyadoo maamulaha guud ee Jarmalka Oliver Bierhoff u sheegay in sharci ahaan aysan Bayern Munich ka celin karin ciyaartoyda inay u dheelaan xulka qaranka haddii loo soo yeero.
Hoeness ayaa hanjabaadaan ka sheegay mar uu la hadlayay jariirada Jarmalka ee Sport Bild, isagoo ku hanjabay inay ka gadoodi doonaan xulka Jarmalka haddii goolhayaha Barcelona uu booska koowaad ka baxsado goolhayahooda.
Laakiin waxa uu 67 jirkaan uu war qoraal ah u diray jariirada kale ee Jarmalka ee Der Spiegel isagoo ka laabtay hanjabaadiisa.
“Wax yar ka dib kulankeenii Champions League ee Red Star Belgrade, Mr Hoeness ayaa ka hadlay go’aankiisa la xiriira booska goolhayaha ee xulka qaranka Jarmalka.” ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday xafiiska Hoeness.
“Laakiin maanta kuma celin doono go’aan kaas la mid ah.
“Isaga dhankiisa arintaan waa la xaliyay, mana jirto wax intaan dhaafsiisan oo uu kaga hadli doono xaaladaan.”
Dooda ku saabsan cida noqoneysaa goolhayaha koowaad ee xulka Jarmalka ayaa kululaatay horaantii bishaan markii Marc-Andre ter Stegen uu ka cawday inaan fursad laga siinin xulka Jarmalka inkastoo uu sannadii 2017 wacdarro u dhigay xulka intii uu Neuer dhaawac ku maqnaa.
Laakiin Neuer ayaa dhaawac ka soo laabtay ka hor Koobkii Adduunka taasoo keentay in tababare Low uu Neuer ciyaarsiiyo oo uu mar kale ka dhigto goolhayihiisa koowaad.
Cabashada Ter Stegen waxaa ka jawaabay Manuel Neuer kaasoo u sheegay goolhayaha Barcelona inuu cabashada iska daayo oo uu la mid noqdo goolhayayaasha ku faraxsan kursiga keydka sida kan Arsenal Bernd Leno iyo Trapp.
Bisha soo socota ee October ayay Jarmalka ciyaarayaan labo kulan oo isreebreebka Euro 2020 ah, waxaana la filayaa in kulan ka mid ah lagu soo bilaabo goolhayaha Barcelona.
Yaa mudan inuu noqdo goolhayaha koowaad ee xulka Jarmalka, Manuel Neuer mise Marc-Andre ter Stegen?